Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Ismiidaamin Ah oo Ka Dhacay Dalka Afghanistan.
Qarax Ismiidaamin Ah oo Ka Dhacay Dalka Afghanistan.
Posted by ONA Admin	/ April 23, 2018
Qarax is miidaamin ah ayaa ka dhacay xarun lagu diiwaan galinayay cod bixiye yaal oo ku taalla magaalada Kabul, halkaasi oo ay ugu yaraan ku dhinteen 31 qof. In ka badan 50 kalana waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo lagu bartilmaameedsaday dad badan oo ku sugnaaa albaabka hore ee laga soo galo xarunta.
Kooxda isku magacaawday dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas’uuliyada qaraxaasi. Diwaan galinta codbixiyeyaasha ayaa bilaabatay horaantii bishan aan ku jirno, waxaana dadkan loo diyaarinayay doorashada xubnaha baarlamaanka oo loo asteeyay in ay qabsoonto bisha Octobar ee sanadkan.
Sawiro laga soo qaaday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinayay dukumiintiyo iyo sawiro daadsan dhulka oo dhiig qariyay. Goobjooge lagu magacaabo Bashiir Axmed ayaa sheegay in dadka waxyeelada ka soo gaadhay ay u badnaayeen dumar xambaarsanaa caruurtooda oo halkaa u yimid in ay helaan kaararka aqoonsiga ayna sidoo kale isku diwaan galiyaan doorashooyinka soo socda.
Toddobaakii la soo dhaafay waxaa dadlka Afghanistan ka dhacay afar qarax oo lagu bartilmaadsanayay goobaha lagu diiwaan galiyo codbixiyaasha. Balse qaraxan ayaa ah kii ugu dhimashada badnaa tan iyo qarixii bishii janaayo oo ay ku dhinteen 100 qof , kaasoo ka dhacay dhismooyin ay dowlada leedahay iyo safaarado.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Afghanistaan ayaa bilowgii sandkaan saxaafada u sheegay in ururka Taliban iyo Daacishba ay bartilmaameedsanayaan shacabka si u khal-khal galiyaan. Ururka Daacisha ayaa dagaal kula jira milatariga Afghanistan iyo taalibaan.